Isikhumbuzo somshado uyisikhathi esibalulekile somndeni. Unyaka ngamunye abashadile baqinisa imizwa yabo ngokwengeziwe, bedlula ngezinkinga ezihlukahlukene zokuphila nezinkinga. Futhi akunandaba ukuthi umshado wangempela uyenzeka kanye kuphela ngesikhathi sokuphila. Isikhumbuzo salo mcimbi sizokukhumbuza usuku lapho izinhliziyo ezimbili zothando zihlangana ndawonye.
Imindeni eminingi ijwayele ukugubha usuku lokugubha usuku - iminyaka emihlanu, 10, 20 kusukela ngosuku lomshado. Kodwa ezinye izinkumbulo zibalulekile ngokulinganayo. Omunye wabo ngumshado we-krypton.
Eminyakeni emingaki lo mbhangqwana kumele uhlale ndawonye ngaphambi komshado kaKrypton?
Uma umndeni uphumelele ukunqoba zonke izithiyo futhi ugcine uthando ngo-19 Iminyaka, ungakwazi ukugubha usuku lwe-krypton. Idethi enjalo ayitholanga ngephutha igama lokuqala. I-Krypton ibonisa ukukhanya. Uma izinhliziyo zothando zisebenze isikhathi eside ukugcina ubuhlobo bokuqala nomunye nomunye, ziletha ukukhanya nenjabulo.
Abanye abantu babevame ukubiza iminyaka engu-19 yomshado i-pomegranate noma i-hyacinth. Kodwa nge-krypton lo mcimbi uhlotshaniswa kaningi kakhulu. Futhi, naphezu kokuthi leli dethi aliyona eyindilinga, kungaba yisikhathi esihle kakhulu seholide lomndeni ojabule futhi oqhakazile.
Indlela yokuhlela umcimbi?
Noma iyiphi inkumbulo ibhekwa njengeholide lomndeni. Akuyona into ehlukile Umshado kaKrypton. Eminyakeni emingaki le mbhangqwana yayihlala ndawonye ngaphambi kwayo? Iminyaka engu-19 yanele ukufakazela ubuqotho ebuhlotsheni babo hhayi kuphela komunye nomunye, kodwa nasezihlotsheni zabo. Ngeholidi, ungabiza abazali bakho, kanye nabangani bakho abaseduze kakhulu. Kuhle uma abantu beza emcimbini abaphendulela iminyaka engu-19 edlule befakaza umcimbi onjalo obalulekile njengokwakhiwa kwe "iseli lomphakathi" elisha.
Kodwa nokho umkhosi wokugubha iminyaka engu-19 akuyona usuku oluyindilinga. Ngakho-ke, ukugubha komlingani kungabonakala futhi kube yedwa komunye nomunye. Kulesi sigaba sokuhlala ndawonye, ezinye imibhangqwana zizwa zibandayo. Ubusuku obuthandana obuthandana luzosiza abantu abanothando ukuba bakhumbule ngaphansi kwezimo abahlangana nabo nokuthi nini banquma ukuqala umndeni. Imizwa ehlile iyovuvukala ngamandla!
Indlela enhle yokugubha iminyaka engu-19 yomshado ingaba uhambo lothando. Ukuthola uhambo oluvuthayo namuhla akulona lukhuni. Ungakwenza kunoma yisiphi isizini. Kubalulekile ukuthatha iholidi elifushane emsebenzini ukuze unikeze isikhathi sakho ngomunye nomunye.
Yini ukupheka ukudla komndeni?
Labo abasenqume ukugubha umcimbi emndenini womndeni, kufanele bacabange ngendlela yokuphatha izivakashi zabo. Isihloko salo mcimbi kuyoba umshado we-krypton. Zingaki iminyaka lo mbhangqwana ohlala ndawonye, izitsha eziningi kufanele zibe setafuleni lokugubha. Kungaba yi-saladi ehlukahlukene kanye nokudla okulula. Kodwa isikhungo sokwakhiwa kufanele sibe isinkwa. Okufanelekile, umnikazi wezindlu kufanele azibheke ngokwakho, kodwa ungayilalela ebhodini.
Ukuhlobisa itafula kungaba ikhekhe lokuzalwa. Namuhla, izinkampani eziningi zinikeza ikhekhe elimnandi nelomnandi nge-design yangempela. Lapha izithombe zezishade, izingane zabo zingaboniswa. Ikhekhe lingasayinwa ekuqaleni. Imikhiqizo enjalo yamakholishi, yebo, ngeke ibe eshibhile. Kodwa isikhumbuzo somshado weminyaka engu-19 sinye kuphela empilweni yabashadile.
Umshado kaKrypton: yini okufanele ujabulise abashade nabo?
Uma umshado kaKrypton ugubha, lokho okumele kunikezwe kunqunywa yisigidi ngasinye. Ngokusekelwe egameni lesikhumbuzo, kuyoba okunengqondo ukwethula okwangempela Isibani se-Krypton. Namuhla, izitolo zinikeza izinhlobo ezihlukahlukene zama-candle nezibani. Kodwa ukukhetha kusengcono ukukwenza, ngokusekelwe kokuthandwa kwabashadile. Ngakho-ke, kubalulekile ukubuza kusengaphambili ukuthi iyiphi imodeli yesibani abangathanda ukuyibona ngaphakathi. Kungcono nakakhulu, hamba ukuyothenga nabo.
Isikhumbuzo sinezinye amagama. Isipho singahlanganiswa ne-hyacinth noma i-garnet. Unganikeza ubucwebe bomshado ngamakhi we-hyacinth noma amagatsha omhlophe. Ngeke kube yizicathulo kuphela, kodwa futhi uhlaka lwezithombe, izimbiza zezimbali, izikhumbuzo zetafula, njll.
Ukujabulisa abashade kanye nanoma yisiphi isipho esiwusizo. Kumele kucaciswe lokho umndeni okudinga okwamanje. Kungaba yisifundo sempahla yasendlini, esake ihlela ukuthenga.
Isipho esikhulu sombhangqwana onothando siyoba uhambo oluya kwelinye lamazwe omabili emhlabeni. Abashadile bangahlala izinsuku ezimbalwa bodwa bese bephumula empilweni yansuku zonke.
Yini okufanele ugqoke iholidi?
Naphezu kokuthi lokhu kakade umshado ongafanelwe, iminyaka engu-19 yokuphila okuhlangene nayo yinto ephawulekayo, okuphakathi kwayo yilabo abashade nabo. Ngakho-ke yizigebengu Imikhosi kufanele ibonakale iphelele. Kulolu suku, owesifazane kufanele akhethe isembatho esihle kunazo zonke ekamelweni, mhlawumbe kangcono, uthenge entsha. Okufanelekile, kufanele kube yembatho emhlophe. Phela, umkhosi wokugubha umshado ugujwa! Indwangu enhle emhlophe izovumela umkakhe ukuba azizwe njengomlobokazi futhi.
Ukuqaphela kufanele kuhokhwe kumlingani wakho. Kufanele ukhethe isitifiketi esizohambisana nokugqoka komkayo. Kungcono ukunikeza okuthandayo ukukhanya okukhanyayo. Akufanele likhohlwe ukuthi umshado kaKrypton ugubha. Eminyakeni eminingana ukukhanya kubhekwa njengophawu lolo suku lokugubha usuku! Izimpawu ezinjalo kufanele zilandelwe ezigqoke.
Ungaphinde unikeze okuthandayo kumathunzi we-burgundy. Phela, uphawu olulodwa olwengeziwe lomkhosi yi-grenade.
Iminyaka engu-19 - ukuphila kuqale nje!
Eminyakeni engu-19 yomshado, lo mbhangqwana wakwazi ukunqoba izithiyo eziningi. Abanye abazange bakwazi ukugcina inyunyana yomndeni ngalesi sikhathi. Kodwa kulabo abawela i- Ezinye zezimiso zabo ngenxa yesiqingatha sesibili, okufanayo kuyazinikezelwa emshadweni kaKrypton. Zingaki iminyaka okufanele zihlale ndawonye? Zingaki ubunzima nezinjabulo ezilindele esikhathini esizayo? Akekho owazi lokhu. Kodwa konke okusezandleni zalabo bantu abaye banquma ukuhlanganisa phakade izifiso zabo.
Ngemva kweminyaka engu-19 yokuhlala ndawonye, imindeni eminingi isivele inezingane ezindala. Isikhathi esincane sizodlula futhi bazokwazi ukuqhubeka nomncintiswano. Bayoba nemindeni yabo. Futhi lokhu kusho ukuthi ukuphila kuqale nje! Umshado kaKrypton ungaba uphawu lwangempela lokuphila okusha. Izingane azidingi iphiko lomzali. Abashadile bangaqala ukuphinde baphile omunye nomunye, kanye neminyaka engu-19 edlule.
Umbhalo i-imeyili: izibonelo, isampula